Hooyada dhashay hoggaamiyaha Boko Xaraam “Wiilkeyga Alle hasoo hanuuniyo” – Awdal State Economic and Political Council.
HomeWararka SoomalidaHooyada dhashay hoggaamiyaha Boko Xaraam “Wiilkeyga Alle hasoo hanuuniyo”
Hooyada dhashay hoggaamiyaha Boko Xaraam “Wiilkeyga Alle hasoo hanuuniyo”
June 17, 2018 Wararka Soomalida
Hooyada dhashay ninka ah hoggaamiyaha kooxda Boko Xaraam Abubakar Shekau ayaa ka hadashay dhibaatooyinka wiilkeeda uu ka wado dalka Nigeria, waxayna sheegtay in dhibaatooyin badan uu ka geystay dalkaas.
Falmata Abuubakar oo idaacadda VOA la hadashay ayaa sheegtay in muddo 15 sano ah aysan indho saarin wiilkeeda, waxayna intaas ku dartay “Waxaan rajaynayaa in uu Alle soo hanuuniyo”.
“Haa waa wiilkayga, hooyo kastana wiilkeeda waa jeceshahay, balse waxaan leenahay dabeecado kala duwan, runtii dhibaatooyin badan ayuu horseeday” ayay intaas ku dartay.
“Ma ahan dhaqankii iyo tarbiyaddii aan aniga baray, ma garanayo waxa ay yihiin waxa uu samaynayo, Alle hasoo hanuuniyo ” ayay tiri.
Kooxda Boko Xaraam oo micnaheedu yahay ‘waxbarashada reer galbeedka waa xaaraam’ ayaa weeraro ka bilowday dalka Nigeria sanadkii 2009-kii, iyada oo sheegtay in khilaafo islaami ah ay ka samaynayso Waqooyiga Afrika.
Illaa 20 kun qof ayaa ku dhimatay rabshadahan, 2 milyan oo kalena waa ay ku barokaceen sida la sheegay.
Sanadkii 2015-kii ayay ku dhawaaqeen in ay ku biireen kooxda Daacish, balse 2016-kii ayay kala go’een kadib markii Daacish ay sheegtay in la badalay Abubakar, laguna badalay nin kale oo lagu magacaabo Abu Musab Al-Barnawi.
Balse Abuubakar ayaa beeniyay, sheegeyna in wali uu isaga hoggaanka hayo.
Mama Falmata waxa ay sheegtay in aysan ka warhaynin in uu noolyahay iyo in kale.
Qaahira iyo London midkee fudud xirashada xijaabka?
Madaxweyne Xaaf oo Ku Dhawaaqaya Goordhow Golihiisa Wasiirada